अस्वस्थ भएर ‘ड्यूटी’ पूरा गर्न नसकेकोमा माफी माग्‍दै राजीनामा दिए जापानी प्रधानमन्त्रीले
Law Hub Nepal भाद्र १२, २०७७
टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै राजीनामा घोषणा गरेका छन् ।
जपानको इतिहासमै सर्वाधिक लामो अवधि प्रधानमन्त्री बनेका ६५ वर्षीय नेता सिन्जो पछिल्लो समय स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका थिए । स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी पछिल्लो दुई साताअघि मात्रै दोस्रो पटक अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
‘मेरो कार्यकालको एक वर्ष अवधि हुँदा हुँदै पनि मैले राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु,’ आबेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको क्रममा भनेका छन् । यस्तै उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा जापानी जनतासँग माफी माग्न चाहेको समेत बताएका छन् ।
आबे पछिल्लो समय ‘कोलाइटिस’को स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्दैआएका छन् । २००७ मा पनि आबेले यसै गरी स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । तर २०१२ मा फेरि निर्वाचिन भएका हुन् । कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने कठिन समयमा अचानक आबेले दिएको राजीनामालाई चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपि उनी सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छन् ।
भारतमा पहिलोपटक महिलालाई मृत्युदण्ड दिइँदै, के गरेकी थिइन् अपराध ?
अमेरिकाको संसदमा ट्रम्प समर्थकको आक्रमण, हिंसात्मक प्रदर्शनमा चारजनाको मृत्यु
महिलाले सवारी चलाउन पाउनुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने अधिकारवादीलाई जेल सजाय
डियगो म्याराडोना : दक्षिणी विश्वका ‘कमरेड’ !
९० प्रतिशतलाई सुरक्षा दिने कोरोना विरुद्धको खोप तयार भएको घोषणा
राष्ट्रपति पुटिनले ल्याउँदैछन् आजीवन सांसद बन्नका लागि नयाँ कानून